टिकट काटेर युएईबाट नेपाल फर्कन किनमेल गर्न गएकी २३ वर्षीया शुकुमायाको निधन, ४ बर्षिया छोरी र परिवार भेट्ने सपना अधुरै ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/टिकट काटेर युएईबाट नेपाल फर्कन किनमेल गर्न गएकी २३ वर्षीया शुकुमायाको निधन, ४ बर्षिया छोरी र परिवार भेट्ने सपना अधुरै !
काठमाडौं, मंसिर २३ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युएईमा एक नेपाली महिलाको निधन भएको छ । स्वेदश फर्कने तयारीमा रहेकी नेपाली महिलाको निधन भएको हो । उनी नेपाल फर्कने समय आउन ७ घण्टा मात्र बाँकी छँदा निधन भएको बताइएको छ । चितवन अप्तारी २ की २३ वर्षीया शुकुमाया टमाटाको घर फर्कने बेलामा निधन भएको हो ।
डिसेम्बर १९ तारिख बिहीबारका दिन नेपाल फर्कने टिकट लिएर सबै तयारी गरेकी टमटाको निधनले नेपालमा उनको परिवार शोकमा डुबेको छ । नेपाल उड्नका लागी केही घण्टामात्रै बाँकी रहेको समयमा सुकमायाको युएईमा नै निधन भएको खबर थाहा पाएका उनका चितवनका परिवार शोकमा डुबेको हो । उनी घर फर्कनु अघि केही किनमेल गर्न बाँकी रहेको र त्यही किनमेलका लागि बजार निस्केको समयमा अचानक वेहोस भएर ढलेकी थिइन् । बेहोस भएर ढलेपछि तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
अजमान स्थित खलिफा अस्पतालमा पुर्याइए पछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो । विदा सकाएर दुई महिना अघिमात्रै युएई फर्केकी उनी विहिवार बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । मुटुको बिरामी भएको र डाक्टरको सुझाव अनुसार नेपालमै उपचार गराउने योजना अनुसार नेपाल फर्किने तयारी रहेको थियो । उनका पति र ४ वर्षकी छोरी रहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।्
डाक्टरले शुकमायालाई सक्दो छिट्टो राम्रो उपचार गराउन सुझाए । डाक्टरको सुझाव अनुसार नै उहाँले नेपालमै उपचार गराउने योजना बनाएकी थिइन् । तर उनले आफ्नो पीडा परिवारलाई भनेकी थिइनन् ।
दुई वर्ष पहिले यूएई पुगेकी शुकुमायाले नेपाल फर्किने त सोचिन, तर भर्खरै नवीकरण गरेको भिसा कम्पनीले सजिलै रद्द गरेर नेपाल पठाउन सजिलो थिएन । कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेपछि नेपाल फर्कन अनुमति मिल्यो ।कम्पनीले भिसा रद्द गरिदियो र एकतर्फी टिकट पनि दियो । निको भएर आउन मन भए कम्पनीले फेरि काममा फर्किने बाटो पनि खुल्ला गरिदियो । तर कम्पनीमा फर्कने बाटोको के कुरा, घर फर्कने बाटो नै सधैंका लागि बन्द भयो ।
मुटुको गम्भीर समस्याले थलिएकी शुकमायाको हृ;द;य;घा;तका कारण ज्यान गएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।आफु यहिँ काम गर्ने भएपनि बिहीबार बिहान दिदीको ज्या न गएको खबर उनका भाइ कमलले साँँझ मात्रै थाहा पाए । बिहीबार बिहान नेपाल पुग्नुपर्ने दिदीको निधन भएको खबर सुनेपछि कमल आफैं अर्धचेत अवस्थामा छन् । छिमेकी दाइ मनोज बिकको साथमा कमल अस्पताल पुगेका थिए ।
बिहीबार बिहानै घर पुग्ने तयारीमा रहेकी दिदीलाई कफनमा बेरिएको देखेका कमलका आँखा ओभाएका छैनन् । गहभरी आँसु बोकेर कमल आफ्नी दिदी शुकमायाको श व सक्दो छिट्टो नेपाल लैजान लागि परेका छन् ।
आइतबार नेपाली दूतावास आबुधाबीमा भेटिएका कमलले भने – ‘नेपाल गएर उपचार गराउँछु, निको भए फेरि कमाउँला भन्नुहुन्थ्यों, संसार नै छाड्नुभयो ।’ कमल राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।